OSMC: သင်၏အိမ်တွင် Raspberry Pi အတွက် multimedia စင်တာဖြစ်သည် အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
OSMC: သင်၏ Raspberry Pi အတွက်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ
သင်တစ်ဦးရှိပါက Raspberry Pi သငျသညျကိုအသုံးပြု။ ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပင်လယ်ရပါလိမ့်မယ် ဒီ SBC မျိုးစုံစွမ်းရည်နှင့်အတူ။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် the with retro video game console ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည် emulators, သို့သော်သင်သည်သင်၏ room ည့်ခန်းအတွက်ကိုယ်ပိုင်အဆင့်မြင့်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာကို OSMC ဖြင့်ယူရိုအနည်းငယ်ဖြင့်သာဖန်တီးနိုင်သည်။
အ Raspberry Pi အတွက်ကွဲပြားခြားနားသော operating systems သူတို့ကစားတွေအများကြီးပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ငါအာရုံစိုက်မယ် OSMC ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ...
2 OSMC အကြောင်း
3 သင်၏ Raspberry Pi တွင်တပ်ဆင်ပါ
Un မီဒီယာစင်တာ (သို့) မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ, multimedia ပါဝင်မှုအားလုံးကိုသင်ခံစားခံစားနိုင်ခွင့်ပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဓာတ်ပုံများကိုပြခန်းများတွင်ဖွင့်နိုင်သည်။ မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများမှ local hard drive တွင်သိုမှီးထားခြင်း (သို့) ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ထိုအကြောင်းအရာကိုရယူခြင်းတို့မှအရာအားလုံး။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းယင်းသည်ရှိသည် extras အချို့အကြောင်းအရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အင်တာနက်ကိုသုံးခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများသို့မဟုတ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများစသည်တို့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဒီမာလ်တီမီဒီယာစင်တာများသည်တစ် ဦး တွင်လည်ပတ်နေနိုင်သည် စက်ကို Raspberry Pi၊ စမတ်တီဗွီစသဖြင့် OSMC ကဲ့သို့သော SBC တွင်မိုဘိုင်း၊ မိုဘိုင်း၊
ဤစနစ်များသည်အထူးသဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်တွင်မကြာမီကလူကြိုက်များခဲ့သည် Microsoft Windows Media Centerဤစင်တာများအတွက် Redmond ကုမ္ပဏီမှလည်ပတ်မှုစနစ်။ ထို့နောက်အချို့ဂိမ်းစက်များတွင်အခြားစနစ်များရှိခဲ့သော်လည်း၎င်းထက်ကျော်လွန်သောလူကြိုက်များသောဆော့ဝဲလ်သည် ...
ဥပမာအားဖြင့်, ရှိပါတယ် စီမံကိန်းများ Kodi, MythTV, OpenELEC, LibreELEC, OSMC စသည်ဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
သူတို့ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် စီမံကိန်း၏ OSMC လူများအတွက်လူများတည်ဆောက်သော လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မီဒီယာစင်တာဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် OSMC အတိုကောက် Open Source Media Center မှလာသည်။ သင်၏ Raspberry Pi ကို ၀ ယ်ရန်အတွက်၎င်းနှင့်ယူရိုသောင်းချီ။ သင့် TV ကိုကြည့်ရှုရန်သင့် living ည့်ခန်းတွင် multimedia စင်တာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
OSMC သည် SBC အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် multimedia အသုံးပြုရန်အတွက်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kodi၎င်းသည်၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီး၎င်းကိုပိုမိုကိုယ်ပိုင်၊ မူရင်းထိတွေ့မှု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစွမ်းရည်နှင့်မည်သည့်ပုံစံကိုမဆိုနီးပါးဆော့နိုင်စေရန် codecs ၏ကြီးမားသော repertoire ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
OSMC လည်ပတ်မှုစနစ်သည် Debian ကိုအခြေခံသည်, ဒါကြောင့်တစ် ဦး အလွန်အစိုင်အခဲများနှင့်ကြံ့ခိုင်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်လေးမှာဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတာပါ။ အကြောင်းအရာပါ။
Debian ကိုအခြေခံပြီးသင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ဟက်ပါ မီဒီယာစင်တာတစ်ခုထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်အောင်လုပ်တယ်။ တကယ်တော့ဒီ distro က app အသစ်တွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အတွက်တရားဝင် repositories သုံးခုကိုအဆင်သင့်ယူထားသည်။ ပရိုဂရမ်များနှင့်မွမ်းမံမှုများများစွာကိုသင်ရယူနိုင်သောနေရာမှဆော့ဝဲစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ Kodi ကိုသုံးသော်လည်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည် Kodi နှင့်မတူပါ။ OSMC ကိုအသုံးပြုသောအခါမူရင်းနှင့်ကွဲပြားမှုများစွာကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုပိုမိုရိုးရှင်းသောအသုံးပြုရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည် ပေါ့ပါးမြန်ဆန်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတွင်ပါဝင်သော extension စတိုးသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။
OSMC သည် Kodi ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ဒါကိုသတိရပါ ၎င်းသည် OSMC ကဲ့သို့သောအားနည်းချက်အချို့လည်းရှိသည် compatibility။ Kodi သည် GNU / Linux, Windows, Android, macOS စသည်တို့ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်သော်လည်း OSMC သည် Raspberry Pi, Vero နှင့် Apple TV အဟောင်းများကိုသာထောက်ပံ့သည်။
OSMC သည် Windows နှင့် macOS အတွက် installer တစ်ခုရှိပြီး Raspberry Pi အတွက် microSD ကဒ်ကိုပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အရာရာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ယခင်က Linux အတွက် installer လည်းရှိခဲ့သည်၊ သို့သော်ယခု၎င်းသည် download ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ စွန့်ပစ်ခံထားရသည်၊ သို့သော်စိတ်မပူပါနှင့်၊ သင် distro တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါကအခြားရှင်းပြချက်များဖြစ်သော Etcher, Unetbootin စသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြမည်။ လာမည့်အခန်းတွင် ... သို့သော်သင် osmc-installer အထုပ်၏မူကွဲအဟောင်းကိုလိုချင်ပါက၎င်းသည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် ဤနေရာတွင်ရနိုင်သည်.
သင်၏ Raspberry Pi တွင်တပ်ဆင်ပါ
သငျသညျလိုလျှင် သင်၏ Raspberry Pi တွင် OSMC ကိုထည့်သွင်းပါထိုသို့လုပ်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ သငျသညျရုံဤအဆင့်ကိုလိုက်နာရန်ရှိသည်:
OSMC ကို download လုပ်ပါ မှ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် စီမံကိန်း၏။ သင့်တွင် Windows operating system ရှိပါကသင်သည်ဤ OS အတွက် installer ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် macOS နှင့်သက်ဆိုင်သော installer ရှိလျှင်သို့မဟုတ်ပုံကိုတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
သင့်တွင်အခြားစနစ်ရှိပါက Disk Images ခလုတ်ကို နှိပ်၍ Raspberry Pi ၏ဗားရှင်းနှင့်အညီစာရင်းပြုစုထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲပုံကိုကူးယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Etcher ကိုသုံးပါ).
အကယ်၍ သင် installer ကိုရွေးလိုက်လျှင်၎င်းကိုသင် run နိုင်သည်။ ၎င်းမှသင်လိုအပ်သော version ကို download လုပ်ရန်၊ installation medium (SD, USB, ... ) နှင့်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန် wizard မှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်လိမ့်မည်။ ပြုပြင်ထားသည်။
သင်ပြီးတာနဲ့ OSMC နှင့်အတူအလယ် ထည့်သွင်းပြီးပါက၎င်းကိုသင်၏ Raspberry Pi slot ထဲသို့ထည့်ပြီး boot တက်နိုင်သည်။
ယခု Raspberry Pi တက်နေပြီ၊ သင်ပြီးစီးရန်အဆင့်များကိုသင်ပြီးသွားလိမ့်မည် Kodi ရ။ သင် Raspberry Pi နှင့်အနည်းဆုံးကီးဘုတ်တစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိရပါ။
OSMC တင်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုသင်ကြည့်ပြီးပြီ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါ၎င်းသည်သင့်အား startup wizard ကိုပြလိမ့်မည် အမျိုးမျိုးသော parameters တွေကို configure။ ဥပမာဘာသာစကား၊ စက်ပစ္စည်းအမည်၊ အခင်းအကျင်းစသဖြင့်။
ယခုအခါ OSMC တပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။ ယခုသင်ဤ operating system ကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးနှင့်၎င်းကိုရယူနိုင်ပြီ Kodi ပြုပြင်ထားသော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » OSMC: သင်၏ Raspberry Pi အတွက်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ
Kirchhoff ၏ဥပဒေများ - လျှပ်စစ်ဆားကစ်ရှိ node များအတွက်အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
Electrolytic Capacitor - သင်သိထားသင့်သမျှ